ULungile Nhlanhla ugila izimanga ekhishini | News24
ULungile Nhlanhla ugila izimanga ekhishini
Izithombe: zithunyelwe ULungile Nhlanhla onothando lokupheka olwamenza wagcina esevule ibhizinisi.
INTOKAZI yase-Hillcrest enothando lokupheka uNksz Lungile Nhlanhla (25) uthe uthando lwakhe lokuba ngumpheki lwaqala esemcane ephekela umndeni wakhe.
Uthe ukhulele emndenini osebenza kanzima futhi ozikhandla kukho konke okwenzayo.
“Ngikhulele eWestville kodwa sengizinze eAlversrone eAssagay. Ukukhula ngaphansi komndeni okhuthele futhi ozikhandlayo kungigqugquzele ukuthi ngifeze amaphupho ami okuba ngumpheki.
ULungile ungenele umncintiswano wabapheki odume umhlaba wonke ngo-2011 owaziwa ngokuthi yi-MasterChef SA.
“Ngesikhathi ngingenela lo mcintiswano ngangineminya eyi-21. Ngawungenela ngenxa yothando enginalo lokupheka, ngaqale ngabona umcintiswano waphesheya kwezilwandle owaziwa ngokuthi yi-International MasterChef bese ngagqugquzeleka ukuba nami ngibe yingxenye yowaseNingizimu Afrika,”
“Kulo mncintiswano ngakwazi ukunyuka ngize ngifike esicongweni sabantu abahlanu, lokho kwangenza ngabona ukuthi impela ngiphiwe uma sekuza ngaseku phekeni. Ngalesosikhathi umndeni wami wawungigqugquzele futhi ubambisene nami.
Lo mncitiswano wangikhulisa wangivula amehlo waphinde wavula eminye iminyango empilweni,”kusho yena.
Uthe emva kokuba kwi MasterChef SA, wavula ibhizinisi lokudla eHillcrest elaziwa ngokuthi yi-Lungiand#039;s Corner.
“Ngikholelwa ukuthi ukudla kuletha injabulo futhi kuhlanganisa abantu bezinhlanga ezehlukene yingakho ngikuthanda ukupheka.
Ngikhumbula ngisakhula ukuthi bengihlezi ngiphekela umndeni wami ukudla okuyisi pesheli ngoba ngangikholelwa ukuthi uma sidla ndawonye kugcwaliseka ukuzwana nothando emndenini,”kusho uNksz Nhlanhla.
Khonamanjalo uNksz Nhlanhla wenza izifundo ze- Bachelor of Consumer Science.
“Konke engikwenzayo ngenziswa wuthando nokugqugquzelwa umndeni, ngakho ngithi intsha ayingavumeli abantu bayidicilele phansi beyitshele ukuthi ayilutho empilweni kumele ihlele konke okuhle efisa ukukwenza empilweni ukuze ibe nempumelelo.”